kacsiga ninka iyo naagta - iftineducation.com
iftineducation.com – Ragga ayaa ku kala dawan ka fakiradda iyo qaabka ay ku xulanayaan qofta ay doonayaan in ay xariirka la sameeyaan waxa ayna ka eegtaan dhinacyo ay ka mid yihiin.
Isku kalsoonaanta: Ninka aad ayuu u Jecelyahay haweeneyda isku kalsoon, Isla markaana taqaana sida ay u qaadaneyso go’aanada iyadoo uusan saameyn ku yeelan rayiga dadka kale.
Ragga haweeneydaas oo kale aad ayay u jecelyihiin waxaa ayna aaminsan yihiin in mas’uuliyad ay leedahay
Haweeneyda Dumarka la tashata :- Ragga waa neceb yihiin haweeneyda haweenka kale u magan gasha si dhibaatooyinka haysta ay ula xaliyaan, ninku waxaa uu raadiyaa haweenayda taqaan sida ay ku xalisan karto dhibka la soo gudboonaada iyadoo qof kale aan maciin bidin, taasina wexey ka fogeyneysaa in Haweenka kale ay Lug-gooyaan.
Haweenka Qeylada Badan :- Ogow Hadaad kamid tahayHaweenka Qeyblada badan in Ninkaaga ama saaxiibkaa uu ku dhibsado Mar walba maxaa yeelay Raggu Ma jecli Haweenka marka loo yimaado Muranka badan.
Haweenka Xushmadda Badan
:Marka Ninkaaga ama saaxiibkaa aad dadkiisa Ixtiraamto oo loo sheego in qof Ixtiraam badan oo dadka jecel aad tahay Ninka aad ayuu kuusii Jeclaanayaa ee Ixtiraamka badi.
Haweenka Guriga ku e gee aan Wareegga aqoonin :- Raggu wexey aad u Jecelyihiin Haweenka Edebta badan ee Guri Joogga ah hadaad kamid tahay waa ok hadaad Wareegtooy tahayse haddaba iska badal Nin ku Rabo ma jiree.
nafaqada guska waa…